Compress uye decompress Zip mafaera ane iOS 11 uye Zipped | IPhone nhau
Nokuburitswa kwesystem nyowani yekushandisa iOS 11 ye iPhone nePadad, yakaunza neayo echimurenga system yekugadzirisa mafaera ese pane chako kifaa. Iyi sisitimu nyowani yakauya neyekuzvarwa app «Archives«, Izvo zvinotipa isu yakawanda kwazvo mikana yekuita kunatsiridza zvibereko, pamusoro pezvose, neIpad yedu.
Pakati pemabasa atinogona kuita nechishandiso ichi tinoshaya mukana wekuti zip uye unzip mafaira zvakananga. Ichokwadi kuti kana tikabatanidza mamwe mafaera kupositi, semuenzaniso, inozvimanikidza kuita faira zip. Zvino, nechishandiso chatiri kuzokuratidza, tinogona kumanikidza uye kupwanya Zip nyore nyore uye nekukurumidza.
1 Compress uye decompress mafaera neZip
1.1 Kumanikidza mafaera pane iyo iPad
1.2 Kusunungura mafaira paPad
1.3 Compress uye Unzip Mafaira pane iPhone
2 Kudhaunirodha Zipped
Compress uye decompress mafaera neZip
Isu tinokupa iwe inonakidza app inonzi Yakapetwa yatinogona kumanikidza uye kudzikamisa mafaera zvakapusa uye nekukurumidza. Uye zvakare, kana isu tiine mudziyo unoenderana neDhonza uye Kudonhedza, iko nyore kwekushandisa kunowedzera zvakanyanya, nekuti nekungokweva mafaera kuapp tinokwanisa kuita basa nekukasira.
Kumanikidza mafaera pane iyo iPad
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita kuvhura zvese zvinoshandiswa, Mafaira uye Zip, uchishandisa iyo kupatsanura skrini.
Kana tangova nazvo, kubva kuFiles isu tinosarudza yega yega yega mafaera atinoda kumanikidza. Kuti tiite izvi, tinofanira kumanikidza pane imwe tobva tadzvanya pane mamwe. Nenzira iyi isu tichave tichiisa mumapoka ese atinoda kumanikidza.
Nhanho inotevera ichave Vazvuzvuradze kuwindo reZip uko kwatinozongofanira kuvawisira pasi.
Kana ivo vatove muZip, meseji inozozviratidza ichitibvunza kana tichida iyo inoguma zip chengeta pane yedu kifaa kana kuigovana.
Kana tikasarudza sarudzo «Sevha faira»Tinogona kusarudza nzvimbo yatinoda mukati meFiles app. Pane kudaro, kana tikasarudza «mugove»Tinogona kusarudza izvo zvinoshandiswa zvatakaisa uye totendera basa iri.
Kusunungura mafaira paPad
Kana tangova nazvo, kubva kuFiles isu tichasarudza zip iyo yatiri kuda kuvhura.
Nhanho inotevera ichave Vazvuzvuradze kuwindo reZip uko kwatinozongo donhedza.
Kana vatove muZip, meseji inozozviratidza ichitibvunza isu kana mafaera asina kuvhurwa atinoda uvachengetedze pane yedu kifaa kana kugovana ivo.
Compress uye Unzip Mafaira pane iPhone
Patinoshanda kubva ku iPhone, maitiro acho anova akaomesesa sezvo isu tine chete hwindo rinoratidzwa. Kunyangwe izvi, ichiri kutsanya chaizvo uye isingadhuri.
Kusiyana neyakaitika maitiro, pane iyo iPhone isu tinofanirwa kutanga tavhura iyo Zipped app uye totanga kushanda kubva pairi.
Kana tangova nemaapplication ekuvhura tinofanirwa tinya pairi kuitira kuti tikwanise kuvhura purogiramu yacho zvakananga Archives.
Kana ichivhura kwatiri, kana tichida dzvanya faira rimwe chete, kudzvanya pairi kuchakwanira. Pane kudaro, kana izvo zvatinoda zviri kumanikidza anopfuura faira rimwe maitiro anochinja.
Kutanga isu tichafanirwa kudzvanya pane sarudzo «Sarudza»Kubva kuFiles app.
Gare gare isu tinomaka yega yega mafaera ekumanikidzwa uye kana tinavo tinya bhatani «Vhura".
Kana izvo zvatinoda zviri unzip Zip faira, maitiro acho akafanana chaizvo. Dzvanya pahwindo rekunyorera uye sarudza iyo yaunoda faira.
Chekupedzisira, zvisinei nekuti tiri kutsikirira kana kuora mwoyo, zvinotibvunza kana tichida chengeta iyo faira kana kuigovana.
Sezvatareva pamusoro apa, chishandiso ichi chinowanikwa kune ese ari maviri iPhone seye iPad kubva kuApp Store. Mutengo weZip uri chete 1,09 €, kuSpain, mutengo wepasi uchifunga nezve nyore kushandisa uye zvatiri kupihwa neapp iyi.
Kana iwe uchifarira kurodha pasi uye kutenga Zped iwe unogona kuzviita kubva pano:
Dhawunirodha Yakatemerwa kwe € 1,09
Mushure mekuyedza iyi app uye pasina chibvumirano chekubatana pamwe nevagadziri vayo tinogona kusimbisa kuti inozadzisa zvakazara chinangwa chayo uye nekutenda kune yayo interface uye iko kuri nyore kuitisa iyo Anoshanda chaizvo app pane edu iPhone kana iPad zvishandiso.
Mazuva zvaari kufamba tinoona maapp acho sei Archives inokura uye inowedzera mikana yayo yekushandisa, sezvataitoziva mavhiki mashoma apfuura, Dropbox o Google Drive Ivo vakatovandudzwa kuti vanyatsoenderana neichi chizvarwa iOS 11 app.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Compress uye decompress Zip mafaera neIOS 11 uye Zip
Tim Cook achasangana nhasi neMutungamiri weFrance Emmanuel Macron
Netflix inoshamisika nekutanga iyo yepamutemo Stranger Zvinhu mutambo weiyo iOS